माओवादी केन्द्रमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी महरालाई, प्रचण्ड स्कुल विभागको ईञ्चार्ज, जनार्दनलाई के ? - Himali Patrika
माओवादी केन्द्रमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी महरालाई, प्रचण्ड स्कुल विभागको ईञ्चार्ज, जनार्दनलाई के ?
हिमाली पत्रिका ९ भाद्र २०७८, 6:56 am
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा कृष्णबहादुर महरालाई तोकेको छ। पूर्वसभामुखसमेत रहेका महरालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा माओवादीले ल्याएको हो।
पहिले माओवादी प्रवक्तामा पम्फा भुसाल थिइन्। माओवादीले एमालेसँग पार्टी एकता गरेपछि प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए।
केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयअनुसार माओवादीले प्रदेश समिति, पार्टी विभाग, जिल्ला ईञ्चार्जहरूसमेत तोकेको छ।प्रदेश नम्बर १ मा सुरेन्द्र कार्की ईञ्चार्ज छन् भने अध्यक्षमा सुरेन्द्रकुमार राईलाई तोकिएको हो।
प्रदेश नम्बर २ को ईञ्चार्जमा गणेश शाह छन्। यहाँ अध्यक्ष तोक्न बाँकी छ। बागमती प्रदेशको ईञ्चार्जमा हितमान शाक्य र अध्यक्षमा नारायण दाहाल छन्।
गण्डकी प्रदेश ईञ्चार्जमा हितराज पाण्डे र अध्यक्षमा हरि अधिकारीलाई तोकेको माओवादीले जनाएको छ। साथै लुम्बिनीको ईञ्चार्जमा चक्रपाणी खनाल बलदेव र अध्यक्षको जिम्मेवारी ओनसरी घर्तीले पाएकी छिन्।
माओवादीले विशेष समिति ईञ्चार्जमा लिलामणि पोखरेल र अध्यक्षमा लेखनाथ न्यौपानेलाई तोकेको छ। प्रवास समिति ईञ्चार्जमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र अध्यक्षमा ओम शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
माओवादीले जिल्ला समन्वय समितिका ईञ्चार्जहरू पनि तोकेको छ भने उपत्यका विशेष समिति पनि बनाएको छ। अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखमा वर्षमान पुन, कृषि तथा भूमिसुधार प्रमुखमा हरिबोल गजुरेल, निर्वाचन विभागमा खिमलाल देवकोटा, विदेश मामला विभागमा सुरेन्द्र कार्की, संगठन विभाग प्रमुखमा जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय सुरक्षा विभागमा कृष्णबहादुर महरा छन्।
स्वास्थ्य विभागमा कल्पना धमला, स्कुल विभाग ईञ्चार्जमा प्रचण्ड र प्रमुखमा गिरिराजमणि पोखरेल छन्। सहरी विकास विभागमा देवेन्द्र पौडेल, स्थानीय तह विभागमा उर्मिला अर्याल छिन्। भौतिक पूर्वाधार विभागमा हरि अधिकारी प्रमुख तोकिएका छन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखमा रामचन्द्र झा छन् भने वन तथा वातावरण विभागमा शक्ति बस्नेत प्रमुख रहेको माओवादीले जनाएको छ।